जातीय सत्ता विरुद्ध न्यायिक आन्दोलनका निम्ति पछिल्लो समय विभिन्न दलमा आवद्ध जनजाति नेताहरुले गरेको शक्ति प्रदर्शनबाट हतास भएर राज्यशक्ति र मीडियामा एकछत्र राज गरेका एक जातीय सत्ताका रक्षकहरु धुँइपत्ताल लागेकाछन् । तिनले गर्नसम्म गरेकाछन् । साम, दाम, दण्ड, भेदको आफ्नो नीति प्रयोग गरिरहेकाछन् ।
नेपालको इतिहासमै जनजातिले देखाएको शक्तिले भयभित भएर तिनले शुरुमा संविधानसभाको निर्मम हत्या गरे । त्यसमा सबै ठूला दलको राय दुरुस्त थियो, बाहेक जनजाति, मधेसी र दलित । किनकी संविधानसभा नमारिएकोभए त्यसबाट यी पीडितहरुले न्याय पाँउनेथिए । तिनले पहिला जस्तो यसरी अधिकार कुण्ठित गरेर जनजाति लगायतका उत्पिडित क्षेत्र चुप लागेर बस्छन् भन्ने भ्रम पालेकाथिए , जुन पूरा हुन सकेकोछैन ।
एमाले र माअ‍ोवादीका कारण संविधानसभा मरेको भन्दै त्यसभित्र एउटा विद्रोह नै शुरु भएकोछ । त्यसलाई यसअघि जस्तो गरि थुम्थुम्याउन नेतृत्वलाई सजिलो भएकोछैन । त्यसैले ति तिल्मिलाएर आफ्ना छोरा, भतिजा, साना बाबुहरुले कब्जा गरेर बसेका मीडिया मार्फत अनापसनाप बक्न लगाइरहेकाछन् । तिनका हनुमानहरुको रामभजन यतिबेला कथित मूलधारका मीडियाहरुमा प्रशस्त देखिईनु त्यसैको रुप हो ।
दलमा सबैभन्दा ठूलो भूँइचालो एमालेमा गएकोछ । एमालेका जनजाति नेताहरुले एमालेले लिएको सिद्धान्तलाई बहुदलीय जनवाद नभई जनैवाद हावी रहेको खुल्लमखुल्ला बताईरहेकाछन् । यी जनजाति नेताहरुले देशका प्रमुख शहरहरुमा गई एमालेको विरोध गरिरहेकाछन् । यस्तो समस्या आएपछि एमालेभित्रका केहि नेताहरुले जातीय संगठन नै विघटन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसले झन घाउमा नुनचुक छरेकोछ ।
संघीयता सम्बन्धि विवाद मेटाउन आयोजना गरिएको भनिएको एमालेको केन्द्रिय बैठक नै बहिष्कार गरिदिएपछि नेतृत्वले त्यो बैठक नै सार्नुपरेकोथियो । बैठकमा उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्यहरु पृथ्विसुब्बा गुरुङ, मधेस इन्चार्ज रामचन्द्र झाँ, विजय सुब्बा, केन्द्रिय सदस्यहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, दलबहादुर राना, रकम चेम्जोङ सहितका नेताहरुले बहिष्कार गरिदिएकाथिए ।
यस्तो विद्रोहको ज्वार सबै दलमा देखिएकोछ । पूर्व सभासद जिपछिरिङ लामा, इन्द्र गुरुङ, पुर्णकुमार शेर्मा , कुमार राई, उर्मिला थापा, ललिता किरिङ मगर , लिला सुब्बा सहितका करिब १२५ जना सभापति सुशिला कोइरालालाई भेटी जातीय नीति लचकता लिए पार्टी छाड्ने धम्की दिइसकेकाछन् । भेटमा नेकाको भातृसंगठन आदिवासी जनजाति संघ सभापति इन्द्र बहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय मगर संघ सभापति गणेश थापा मगर, तामाङ संघका केवल बहादुर लामा, लिम्बु संघका सभापति प्रवीणविक्रम नेम्वाङ, शेर्पा संघका सभापति लाक्पा छिलेन शेर्पा, नेवाः खलका सभापति नेमासिं नकर्मी, किरात आदिवासी जनजाति समाजका सभापति आनन्द सन्तोषी राई जस्ता प्रभावशाली तथा पुराना नेताहरु गएकाथिए ।
एमाअ‍ोवादीमा जातीय नीति विशेषगरि जातीय स्वायत्तता सम्बन्धि नीति छिराउने सुरेश आले र पूर्व जनमुक्तिका युवा नेता तथा अहिलेका माओवादी भित्रका उग्र नेता गोपाल किराती जस्ताहरुको नेतृत्वमा त्यस दलभित्र जातीयतामा घम्साघम्सी चलिरहेकोछ ।
कुनै समय थियो गोरेबहादुर खपागीं देशका कुनाकाप्चामा जातीय चेतना छर्न हिंड्दा सत्ताका भरौटेहरु एकसाथ उनीमाथि खनिन्थे । अबुझ जनजातिहरु नै उनलाई ति सत्ताका पुजारीहरुसंघ घाँटी जोडेर म्याऊ म्याऊ गर्दथे । तर खपागींहरुले राजनीतिकरण गरेको जातीय चेतनाको मात्रा यति ठूलो भएकोछ कि परम्परागत मान्यतामा यति ठूलो पहिरो गएकोछ कि त्यसलाई छेकथुन गर्न सक्ने बलबुता कसैको देखिदैन ।
जनजातिको जनसंख्याले ढाकेको नेपालमा कसैले यो समूदायको समुल नष्ट गर्छु भनेर सोंच्ने हिम्मत पनि गर्न सक्दैन । किनकी यीनको सामुहिकता अल्पसंख्यक हैन बहुसंख्यक छ ।
जातीय सत्ता बचाउन यथास्थितिवादीहरु ( प्रमुख ३ दल, मीडिया, प्रशासन, विदेशी शक्ति) ले संविधानसभा त भंग गरिदिए । तर अब चेतनाको विद्रोहको निशाना दलहरुमाथि शुरु भएकोछ । यदि संविधानसभा भएकोभए जातीय चेतनाको बहस दलहरुभित्र पक्कै हुन पाउने थिएन । तर त्यसको हत्या गरिदिएपछि अबको केन्द्र दलहरु बनेकाछन् । जनजाति नेताहरुलाई सर्वसाधारणले सोधिरहेकाछन् – तैले के गरिस ? त्यो प्रश्न ठेग्न नसकेपछि उनीहरुले दलभित्र त्यहि प्रश्न आफ्ना नेताहरुलाई सोध्न थालेकाछन् । यो यस्तो प्रश्न हो जसको सामना गर्न जातीवादी सत्ताका पक्षपोषकहरुलाई धेरै गाहे छ । देशमा चेतनाको बहस शुरु भएकोछ । त्यसलाई निष्कर्षमा कसरी पुर्याईन्छ त्यो त भविष्यले बताउला । तर अब हिंजोका दिन गए । उत्पिडितहरुका लागि भोलिको सुनौलो विहानीको शुरुआत भएकोछ, जसलाई कुनै शक्तिले रोक्न सक्ने वाला छैन । किनकी हिंजो कमजोर जनजातिले शुरु गरेको प्रश्नमा आज देशको पूरै शक्ति खनिएकोछ र पनि केहि लछार्न सकेकोछैन । देशको बहसको केन्द्र नै जनजातीमय भएकोछ ।
Last Updated on Friday, 08 June 2012 01:48
समाचार विश्लेषण, राज्यसत्ता ब्यूरो
अधिकार दिनुभन्दा संविधानसभाको घाँटी रेट्न बेस भन्ने विश्लेषणको आधारमा संविधानसभाको हत्या गरिएकोछ । प्रमुख ३ दल र मधेसी दलहरुको संयुक्त सहमतिमा यस्तो अपराध गरिएकोछ । इतिहासमा सबैभन्दा बढी समावेशी यस्तो सभालाई हत्या गर्नेहरु कोठामा बसेर अट्टहास गरिरहेका होलान् तर उत्पिडितहरु भने डाँको छाडेर रोइरहेकाछन् ।
यदि अन्तिम समयमा जनजाति आन्दोलनको डरलाग्दो हुरी नआईदिएकोभए एक जातीय सत्ताका भरौटेहरुले संविधानसभा मार्ने नै थिएनन् । अन्तिम समयमा सबै दलहरु नाम विनाको प्रदेशमा सहमति गरेर संविधान जारी गर्न भनि हात मलेर बसिरहेकाथिए । तर जातीय स्वायत्तता विना कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गरिन हुदैंन भन्दै देशका कुनाकुनाबाट भीर माहुरी जस्तो जनजातिहरुको ओइरो सत्ताको करीडोरमा उफ्रन आएपछि सत्ताका स्तम्भहरु काँपेकाथिए ।
करिब ३० बर्ष देखि असंगठित÷संगठित रुपले आन्दोलनरत जनजातिहरुको यो विध्न एकता कहिल्यै नदेखेका सत्ताका नाईकेहरु कम्पायमान हुनु कुनै अनौठो थिएन । जनजातिहरु दलका नाममा जोत्ने बहर गोरु हुन् यिनलाई जसरी पनि दाईंन सकिन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता बोकेका दलहरु यहिनेर चुके । तिनले जातीय रुपमा यो विध्न एकता हुन्छ भन्ने कल्पना समेत गरेकाथिएनन् । विशेषगरि पहाडे जनजातिहरुले यत्रो आँट गर्लान भन्ने तिनको पुरानो ढर्राको मगजमा त पक्कै थिएन । पहाडे जनजातिलाई उल्लु बनाएर खाईपोई आएको तिनले यस्तो सोच्नु अन्यथा थिएन ।
यद्यपि संघीयता आफ्नो खल्तिमा राखेर अन्तरिम संविधान जारी गर्न खोजेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता हस्ती नेताको त सातोपुत्लो उड्ने गरि मधेस आन्दोलन भएपछि तिनले पुनः राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर अन्तरिम संविधानमा संघीयताको प्रावधान थप्नु परेकोथियो । धेरैले संघीयता माओवादीले ल्याएको भन्ठान्छन् तर त्यतिबेला माओवादीले सत्तामा पुग्न संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई बलि चढाइसकेकोथियो । यदि मधेस आन्दोलनको उभार नआएकोभए नेपालमा संद्धान्तिक रुपमै सहि संविधान आउन अझै बर्षौ लाग्थ्यो । त्यसैले यसको श्रेय मधेसी चेतना र आन्दोलनलाई दिईनु पर्दछ । वास्तवमा संघीयतामा दलहरु कोहि गम्भीर छैनन् भन्ने दृष्टान्ट मधेस आन्दोलन नै हो । तर यसपालि मधेसी दलका मधेसी मूलका बाहुन र उच्च जातका नेताहरु किन संविधान मार्न ३ दलसंग लहसिए त्यो छुट्टै विश्लेषण्को पाटो हो तर मधेस आन्दोलनले नै संघीयता स्थापित गरेको चाहिं पक्का हो ।
अहिले पुनः त्यहि नियति दोहोरिएकोछ । मन नमानी नमानी संघीयतामा जान त सहमति गरियो तर जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा गए देश विखण्डन हुन्छ भन्दै संघीयता विरोधी भ्रम फैलाउनमा दलका ठूला नेताहरु नै लागेकाथिए र छन् ।
तिनले ६०१ सभासदले संविधान बनाउन नसकेको भन्दै उनीहरुमाथि दोष थोपरिदिएकाछन् । तर यथार्थ त्यो होइन । सभासदले रातदिन खटेर काम गरेकाछन् । तर दलहरुले नै उनीहरुलाई पँगु बनाएर राखेकाहुन् । देशविदेश शयरमा पठाईदिने र एनजिओहरुको डलरमा भुलाएर दलका नेताहरुले नै तिनलाई भुत्ते गराउन चाहेकाथिए । प्रयास सधैं यहि रहिरहयो, तिनले कहिल्यै जातीय मुद्दामा एक स्वर ननिकालुन् ।
जातीय मुद्दामा मतदान गर्नु पर्दा सधैं दलको ह्विप लाग्ने अवस्था श्रृजना गरेर तिनलाई जुट्नबाट रोकियो । पक्षमा मतदान गर्न दिइएन । ति एक किसिमले दलका रबरस्ट्याम्प मात्र थिए । अर्थात जुवामा नारिएको त्यस्ता दुईटा पठ्ठा बहर थिए जसलाई दाँयाबाँया हेर्न बन्देज नै थियो । उनीहरुले चर्न पाउने कुरा त धेरै टाढाको रहयो । यदि चाहेकाभए दलका नेताहरुले २ बर्षमै संविधान जारी गर्न सक्थे । तर ति कोहि त्यस्तो सदिक्षा राख्दैनथे । किनभने प्रष्ट थियो , यदि संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने हो भने त्यसले आफुले र आफ्नो समूदायले खाईपोई आएको भाग पूरै बाँडिनेछ । समानताको नियम कानुन र अधिकारका ब्यवस्था गरिनेछन् जसले आफ्नो थालीमा सिधै हस्तक्षेप गर्दछ । यस्तो सोंचाईकै कारण ४ बर्षसम्म संविधानसभालाई पेण्डलुम बनाएर राखियो । ९ अरब खर्च गरेर संविधानसभाका सभासद निकम्मा हुन् भन्ने भ्रम छरियो । नपढेका, पाखे, गँवार, आपराधिक भन्दै संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै सभासदहरुको मानमर्दन गर्ने काम षड्यन्त्र अन्र्तगत नेताहरुले गर्दे आएकाथिए । यसमा मुलधारका मीडियाले तिनलाई खुलेरै साथ दिए । मुलधारका मीडियामा भएका ९० प्रतिशत सत्ताधारी जातिका पृष्ठभूमीका पत्रकारहरुले यसो गर्दा आफ्नो जातीय स्वार्थलाई सर्वाेपरि ठानेको देखिन्छ ।
यसो किन गरियो भने यी दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रबाट आएका साँच्चिकै जनप्रतिनीधि थिए । राजधानीमा हुर्केका अग्रेंजी स्कूलमा पढेका, पुल्पुलिएका र उच्छृखलता नाघेका पृष्ठभूमिका कोहि थिएनन् । यस्ता जनप्रतिनीधिहरुले इमान्दारीपूर्वक संविधान बनाउँछन् भन्ने भय सत्ताधारीहरुलाई सधैं रहेकोले तिनले यस्तो षड्यन्त्र गरेकाथिए । संविधानसभाको अन्तिम बैठक नै बस्न नदिएर यी ६०१ लाई लज्जास्पद रुपले घर घर पठाउने दलका नेताहरु यि जनप्रतिनीधिहरुप्रति हदैसम्मको घृणा गर्दाे रहेछन् भन्ने देखिएकोछ ।
यी इमान्दार थिए भन्ने बारम्बार तिनले प्रमाणित पनि गरिदिए । जनजाति, महिला, दलित, मधेसी ककस बनाएर तिनले पछाडि पारिएकाहरुको साँच्चिकै वकालत गरे । यो सरकार चलाउने सभा हैन जनताको भाग्य लेख्न बनाइएको सभा हो भन्ने तिनले नेताहरुलाई बारम्बार सम्झाउन चाहे । तर ति बिचराले चाहदैमा के हुन्थ्यो र ? तिनका कुरा सुन्ने कुरै थिएन । संविधानसभा संगै ति ६०१ जनाको पनि साथसाथै एकै चिहान बनाइयो । यस्तो बहादुरी प्रम बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गरियो । कहिल्यै स्कूलमा दोश्रो नआउँदैमा र माक्र्सवादको पोथा घोक्दैमा कोहि बुद्धिमानी र अग्रगमनकारी हुँदोरहेनछ भन्ने ठूलो उदाहरण बाबुराम भएकाछन् । सबैभन्दा क्रान्तिकारी भनिने उनले नै जनताको भाग्य लेख्न बनाइएको युगमा एक चोटी आउने संविधानसभाको बलि चढाएकाछन् । मार उनले हानेकाछन् अरु शीर्ष नेताहरु पुजारीको भेषमा मन्त्रोच्चारण गर्दे लहरै उभिएर हासिँरहेकाछन् ।
संविधानसभाको बलि दिईनुको प्रष्ट कारण छ । जातीय र पहिचानका मुद्दामा एक हुने भन्दै ३२२ जना जनजाति र मधेसी सभासदहरु, जुन विभिन्न दलसंग आवद्ध थिए, ले हस्ताक्षर संकलन गरे । तिनले चाहेमा मतदानबाट जस्तोसुकै संविधान पास गराउने सामथ्र्य राख्थ्यो ।
यस्तो एकताले नेताहरु अवाक भए । बाहिर इतिहासमै नदेखिएको जनदवाव छ उता भित्र सभासदहरु त्यसरी एकिकृत भएर आएकाछन् । त्यो परम्परागत जातीय सत्ताको निम्ति खतरनाक संकेत थियो । आँ गर्दा कुरो बुझ्ने राजनीतिका धुरन्धर खेलाडीहरुले आफ्नो पाईतला मुनीबाट जमीन भासिदैछ भन्ने बुझेपछि संविधानसभालाई बलि दिने योजना बनाए । बाहिर अलि अलि ठाकठुक गरियो । तँ रोए जस्तो गर म पिटे जस्तो गर्छु भन्ने नाटक मन्चन गरियो । अन्ततः संविधानसभा र तिनका सदस्यहरुलाई घाँटीमा पठ्ठा बाँधेर शक्ति देवीको मौलाको अगाडि लगेर छिनालियो । ति अब बलीको भुटुन बनाई प्रसाद चपाइरहेकाछन् । तर आफ्नो भाग्यलेखनका निम्ति त्यहाँ पठाइएका प्रतिनीधिहरुको त्यसरी देवीको नाममा हत्या गरिएको टुलुटुलु हेरिरहेकाहरुको भने भक्कानो छुटिरहेकोछ । यो भक्कानो बढ्दो छ । भन्न सकिदैन । भोलि यहि भक्कानोले नै नेपालको परम्परागत दैवी सत्ताको जग उखेलिदिने सामथ्र्य पनि राख्दछ । त्यसको प्रारम्भिक र आक्रमक यात्रा भने शुरु भैसकेकोछ ।
Last Updated on Monday, 31 December 2012 12:08